Kow iyo Toban Arday Soomaali ah oo heley Deeq Waxbrasho gobolka Ohio – Radio Muqdisho
Sanad walba xilligan oo kale waxaa magaalada Columbus Ohio ee dalkan Mareykanka lagu qabtaa xaflad loogu talo galay ardayda dhamaysatay dugsiyada Sare iyo kuliyadaha kala geddisan ee gobolka Ohio.
Xafladdan oo ay qeybaha bulashada, madaxda gobolka iyo ardayda intuba ka soo qeybgalaan waxaa soo abaabulay isla markaana soo waday mudo 9 sano ah hay’ada SomaliCAN, oo ah hay’ad u adeegta bulshada, waxaana laf dhabar u ah Prof. Jibril Mohamed.
Waxaa goobta ka hadlay madaxda dowladda hoose, gobolka iyo heer qaran, Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiriyaha xafiiska duqa magaalada, Abukar Osman Balle Safiirka Dowlada Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay iyo Mas’uuliyiin kale.
Doorka waliidiinta Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamay mid aan qarsoomi karin iyada oo loo mahad celiyay waalid walba oo ubadkiisa gaarsiiyay meel uu ka sii socon karo isla markaana Tusaale wanaagsan u noqon kara Jiilasha la siman.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo qeybgasha xafladan sanad walba waxa ay ka helaan deeqo waxbarasho iyo dhiiranaan ay ku sii wataan waxbarashadooda. Deeqaha waxbarasho waxaa gacan weyn ka geysta qareennada Flickinger Legal Group oo muddo dheer la shaqaynayay bulshada Soomaaliyeed.
Sanadkan, waxaa abaalmarin la gudoonsiiyay 11 Arday oo kala ahaa Shan wiil iyo Lix gabdhood, waxayna qeyb ka ahayeen arday badan oo aan ku soo bixin qorituurkii loo sameeyay ardada. Ardada
Barnaamijka qalinjebinta iyo deeqaha waxbarashada Ohio ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo dedaalka dheeriga ah ee ardayda iyo waaliddiinta Soomaaliyeed ka sameeyaan dhanka waxbarashada taas oo si weyn uga dhex muuqata marka loo eego qowmiyadaha soo galootigaa.
Dhiirogalinta iyo qabashada xafladan ee sanadwalba waxay niyad dhis iyo baraarug u noqotaa dhalinyaro baddan oo ku dhiiraday in ay dib ugu laabtaan waxbarashadoodii.
Xafladda qalinjebinta ayaa ku soo dhammaatay farxad iyo rayrayn iyada oo waaliddiinta iyo madaxda bulshadu hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen ardada ku guulaysatay deeqaha waxbarasho iyo dhammaan ardada ka baxday dugsiyada sare iyo jaamacadaha Ohio sannadkan 2018.
Deeqo Shire (SONNA)- Columbus Ohio
Ra’iisul wasaaraha oo booqday dhaawacyada qaraxii shalay+ Sawirro
Ra'iisul wasaaraha oo booqday dhaawacyada qaraxii shalay+ Sawirro